ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာကွဲပြားခြားနားမှုများကိုရောင်ပြန်ဟပ်ခြင်းအာဖရိက / ဥရောပ - Afrikhepri Fondation
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, သြဂုတ်လ 4, 2021
ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာကွဲပြားခြားနားမှုအာဖရိက / ဥရောပစဉ်းစား
ငါလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကဒီဟောပြောချက်လေးကို Burkina Faso မှာရှိတဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီပေးရေးအပိုင်းအဖြစ်ကျွန်တော်ရေးခဲ့ဖူးတယ်။ အဲဒီမှာအချိန်ရှိသူတွေနဲ့ဖတ်ချင်တဲ့သူတွေကိုမျှဝေချင်ပါတယ်။ ၎င်းသည်အပြည့်အဝအသုံးမပြုရန်ရည်ရွယ်ထားသော်လည်းအချို့မီးအိမ်များကိုအလင်းပေးသည်။ ဤစာသားသည်အငြင်းပွားဖွယ်ရာမဟုတ်ပါ၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း - ကျွန်ုပ်သည်တစ်ခါတစ်ရံတွင်လွယ်ကူစွာသဘောတူထားသော်လည်းလူကြိုက်များမှု၏စျေးနှုန်းသည်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံအပေါ်အခြေခံသည်။ ဤအပိုင်းသည်ပထမ ဦး ဆုံးဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့ဤနေရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့ကူညီနိုင်သည့်အကောင်းဆုံးအသုံးဝင်သောအကူအညီမှာကျွန်ုပ်တို့၏ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ဆာဟာရတောင်ပိုင်းအာဖရိကလူမျိုးတို့၏ယဉ်ကျေးမှုအကြားမရှိမဖြစ်ကွဲပြားခြားနားမှုများနှင့်ပတ်သက်သောအယူအဆအချို့ကိုသင့်အားမျှဝေပေးရန်ဖြစ်သည်။ ယဉ်ကျေးမှုခြားနားချက်နှင့် ပတ်သက်၍ - အာဖရိကယဉ်ကျေးမှု (အနောက်အာဖရိက) နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဥရောပယဉ်ကျေးမှုနှင့်အနောက်တိုင်းတွင် ပို၍ အရေးကြီးသောကွာခြားချက်ရှိသည်။ ဤကွာဟချက်၏မူလအစကိုပထမ ဦး ဆုံးရှင်းပြရလျှင်ဥရောပသားများသည်“ စာဖြင့်ရေးသားထားသော” ယဉ်ကျေးမှုဟုခေါ်ကြပြီးအာဖရိကသားများသည်“ ပါးစပ်” ယဉ်ကျေးမှုဟုခေါ်ကြသည်။ ဤကွာခြားချက်သည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပြီးသင်နားလည်သဘောပေါက်သောအခါ၊ အနောက်တိုင်းသားတစ်ယောက်အနေဖြင့်ယခုအချိန်အထိသင်မအံ့သြသင့်သောအပြုအမူများစွာသည်သင်ပိုမိုနားလည်လာလိမ့်မည်။ အထူးသဖြင့်၊ သင်သည်ကြီးလေးသောအမှားများကျူးလွန်ခြင်းနှင့်သံတမန်ရေးရာအဖြစ်အပျက်များကိုဖြစ်ပေါ်စေခြင်းမှရှောင်ရှားလိမ့်မည်။ ငါချဲ့ကားပြောနေတာပဲ၊ ဒါပေမယ့်ရှက်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေတွေမှာစိတ်ရှုပ်ထွေးခြင်းကိုမရှောင်ရှားနိုင်ဖို့သိထားသင့်တဲ့အချက်အနည်းငယ်ကျန်သေးတယ်။
ရေးခြင်းသို့မဟုတ်ခံတွင်းယဉ်ကျေးမှုဟူသည်အဘယ်နည်း။ ကျွန်ုပ်၏ပထမဥပမာကိုအောက်ပါမေးခွန်းဖြင့်သရုပ်ဖော်ပါလိမ့်မည် - အနောက်တိုင်းလူငယ်တစ် ဦး သည်သူသည်သမိုင်းကြောင်းဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကိုရှာဖွေလိုသည့်အခါ၊ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကိုအတိုချုပ်ပြောရလျှင်သူကိုယ်တိုင်လေ့လာလိုသောအခါဘာလုပ်သနည်း။ အဖြေသည်ရှင်းလင်းပြီးရှင်းလင်းပြတ်သားမှုရှိသည်။ သူသည်အနီးဆုံးစာကြည့်တိုက်သို့ သွား၍ သူ၏မေးခွန်း၏အဖြေကိုစာအုပ်များမှရှာဖွေရန်စာအုပ်များသို့သွားလိမ့်မည် (သို့မဟုတ်၊ ယနေ့အချိန်တွင်သူသည် ၀ က်ဘ်ကိုလှည့်ပါလိမ့်မည် ... ) ။ ထို့ကြောင့်သူသည်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်နှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုရှာဖွေနေပါကသူသည်ဤစာကြည့်တိုက်၏“ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်” ကဏ္sectionsများကိုရည်ညွှန်းလိမ့်မည်။ သို့သော်သူ့အဘိုးအားမေးခွန်းထုတ်မည့်သူအားမည်သူကမျှမေးမြန်းမည်မဟုတ်ပါ။ သူသည်ထိုစစ်ပွဲကိုဖြတ်သန်းခဲ့ရပြီးသူ၏အကောင်းဆုံးသောသမိုင်းစာအုပ်များထက်စာလျှင်ပညာရေးနှင့်စိတ် ၀ င်စားမှုနည်းသော၊ ဖြေဆိုနိုင်ခဲ့သည်။ ဒီဥပမာကရိုးရှင်းပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့စာရွက်၊ မော်ကွန်းတိုက်၊ ပုံရိပ်နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ link ကိုအပြည့်အဝဖော်ပြသည်။ ဤစာရေးခြင်းယဉ်ကျေးမှုကိုကျွန်ုပ်တို့ခေါ်နိုင်သည်။
တူညီသောအချက်အလက်များကိုရှာဖွေလိုသောအာဖရိကန်လူငယ်များသည်အကြီးအကဲများ၊ ပညာရှိများ၊ သိထားသူများ၊ အသက်ရှင်နေထိုင်ခဲ့သူများ၊ အတွေ့အကြုံရှိသူများနှင့်ဤအကြောင်းပြချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့လေးစားသူများကိုမေးမြန်းခြင်းဖြင့်စတင်ပါလိမ့်မည်။ အိုး !! ဟုတ်ပါတယ်၊ မင်းပြောမယ်၊ ဒီနေ့အာဖရိကန်လူငယ်တွေဒီစာပေတွေ၊ သမိုင်းစာအုပ်တွေ၊ အနောက်နိုင်ငံများသည်ဤအသိပညာအားလုံးကို "ချမှတ်" ခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော်၎င်းကိုအသုံးမပြုမီသူသည်ပညာရှိများနှင့်အကြီးအကဲများကိုရည်ညွှန်းလိမ့်မည်မှာသေချာသည်။ ဤအရာသည်ကျွန်ုပ်တို့ခံတွင်းယဉ်ကျေးမှုဟုခေါ်ဆိုနိုင်သောအရာဖြစ်သည် အဲဒီမှာသင့်မှာအဲဒီမှာရှိနေပြီ၊ အခုအခြေခံတွေထားပြီ။ သင်ကဘဝလမ်းစဉ်အပေါ်အမှန်တကယ်အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိသောယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာကွဲပြားခြားနားမှုသေးသေးလေးများကိုသာပြောပြလိမ့်မည်။
ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာကွဲပြားခြားနားမှုအာဖရိက / ဥရောပအပေါ်အသေးစားရောင်ပြန်ဟပ်မှု
အကြီးအကဲများကိုလေးစားခြင်းပါးစပ်ယဉ်ကျေးမှု၏ပထမအကျိုးဆက်မှာအာဖရိကရှိအကြီးအကဲများကိုအလွန်ရိုသေလေးစားခြင်းသည်သံသယဖြစ်ဖွယ်မရှိချေ။ အဲဒီမှာဒီမှာမတူတာကမွေးကင်းစကလေးသေတာထက်အကြီးအကဲတစ် ဦး သေဆုံးခြင်းအတွက်အများကြီးပိုတောင်းပန်ပါတယ်၊ အာဖရိကမှာကျွန်တော်တကယ်ရှာတွေ့တဲ့ဥပစာစကားကိုသုံးတယ်။ (ဒါကငါ့ရဲ့ကန ဦး နမူနာကိုပဲတန်ဖိုးထားဆဲ) ။ အနောက်တိုင်းယဉ်ကျေးမှု၏လူ ဦး ရေသည်ဟောင်းနွမ်းသောကလေးငယ်တစ် ဦး (သို့) မွေးကင်းစကလေးသေဆုံးခြင်းသည်လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်အလွန်အမင်း ၀ န်ထုပ်ဝန်ပိုးဖြစ်လာသည့်အတွက်သူသည်ကားရပ်နေသည်ကိုတွေ့ရခဲသည်။ အဆောင်ထဲမှာ) မိသားစုသက်သာရာမှစီစဉ်ပေးခဲ့သည်။
အဟောင်းကိုရိုသေလေးစားမှုမရှိခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားသူမသင်ကြားရန်နောက်ထပ်ဘာမျှမရှိဟူသောအချက်၏ချက်ချင်းအကျိုးဆက်ဖြစ်သည်။ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု၏အဓိပ္ပာယ်ပဲရစ်မြို့သို့မဟုတ်ပြင်သစ်ရှိမည်သည့်မြို့ကိုမဆိုလမ်းလျှောက်ပြီးသင့်ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိလူများကိုကြည့်ရှုပါ။ သူတို့ဘာလုပ်ကြမလဲ သူတို့ကသူတို့ခြေထောက်တွေကိုကြည့်တယ်၊ ရှေ့ကိုကြည့်၊ အကြည့်တခုကိုကြိုးစားကြည့်တယ်၊ ငါဆက်သွယ်ရေးအစစ်အမှန်ကိုတောင်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူး၊ အကြည့်တွေအကြောင်းပြောနေတယ်။ အရမ်းခက်တယ်၊ အသုံးလည်းမရှိဘူး၊ ကိုယ်ချင်းစာခြင်းထက်သင်ပိုမိုဒုက္ခရောက်လိမ့်မည်။ ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုရေးသားထားသောယဉ်ကျေးမှုလူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့လူကိုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရနေသောကြောင့်။ သူသည်သူ၏ပြproblemsနာများကိုတစ် ဦး တည်းဖြေရှင်းနိုင်သည်၊ သူသည်အခြားသူများကိုသတင်းအချက်အလက်ရယူရန်မလိုအပ်ပါ။ သူလုပ်ထားသမျှမှာစာကြည့်တိုက်တစ်ခုတည်းကိုသာသွားပြီး၊ လိုချင်သောစာအုပ်တစ်အုပ်တည်းကိုသာဖတ်ခြင်း၊ အင်တာနက်ပေါ်မှာ။ အခြားဆက်သွယ်ရေးများနှင့်ဆက်သွယ်မှုသည်မရှိတော့သည့်အတွက်ကြောင့်ဒုတိယနေရာတွင်ရှိသည်။
အာဖရိကတွင်၎င်းသည်လုံး ၀ ကွဲပြားခြားနားသည်။ မြို့တော်များ၌ပင်အကြောင်းပြချက်မှာရိုးရှင်းသည်။ ၎င်းသည်ဗဟုသုတကိုပိုင်ဆိုင်ထားသည့်အခြားသူတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ , အသိပညာနှုတ်မှတဆင့်ကူးစက်သောဖြစ်ပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့်ငါသင်ယူဖို့အခြားလိုအပ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်သူနှင့်စကားများလေ၊ သူနှင့်ကျွန်ုပ် ပို၍ စကားပြောလေလေ၊ ကျွန်ုပ် ပို၍ သင်ယူလေလေ၊ သူမနှင့်အကောင်းဆုံးဆက်သွယ်မှုကိုတည်ဆောက်ရန်အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားမည်။ ဒီမှာသင်, Ouagadougou, ဒါမှမဟုတ် Bamako, alpaca မှာပထမ ဦး ဆုံးလာမယ့်သူစိမ်းတစ်ယောက်ကလမ်းလျှောက်နေတယ်၊ ​​သူကမင်းအကြောင်းသိချင်တယ်၊ သူဆွေးနွေးချင်တယ်၊ မင်းကိုမင်းရဲ့ဘဝအကြောင်းပြောပြချင်တယ်၊ ကျူးကျော်မှုမရှိဘူး၊ mercantile ချဉ်းကပ်မှု (ဤအကြောင်းအရာနှင့်ကျွန်ုပ်တို့မကြာခဏပြန်လာခြင်းကြောင့်တူညီစွာသတိပြုပါ။ ) သူသည်သင့်ထံမှသင်ခန်းစာယူရန်၊ သင်နှင့်အတူမျှဝေရန်လိုသည်။ Grand Marché၏ Ouaga သို့မဟုတ် Bobo ၏ဝန်းကျင်ကသင်၏ကျေးရွာငယ်လေးကိုလူ ၅၀၀ ၏စျေးကွက်ကိုစဉ်းစားစေနိုင်သည်။ လူတိုင်းတစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်သိပြီးတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ဆွေးနွေးကြတယ်၊ ငါတို့တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်မသိဘူးဆိုရင်တောင်ဒါဟာအကောင်းဆုံးအခွင့်အလမ်းပဲ။
ပြင်သစ်နိုင်ငံသို့ပထမဆုံးအကြိမ်ရောက်ရှိလာသောသူနှင့် "ရပ်ရွာတွင်နေထိုင်ရန်မည်သို့သိသည်" ကိုသူအသုံးပြုနေစဉ်သူသည်ဖိနပ်ကိုမျက်နှာသို့လှည့ ်၍ ခေါင်းလှည့်နေသောမျက်နှာများနှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ရသောမာလီယန်သို့မဟုတ်ဆီနီဂေါလူမျိုးတို့၏အံ့အားသင့်မှုကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ အချိန်ကာလတစ်ခု၊ လမ်းညွှန်တစ်ခုသို့မဟုတ်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းသတင်းအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့တောင်းသည့်အခါဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည်။
“ no” သည်စကားဝိုင်းများမှပိတ်ပင်ထားပြီးဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ယခင်ကမြင်တွေ့ခဲ့ရသည်၊ ဆက်သွယ်မှုနှင့်၎င်း၏အရိုးရှင်းဆုံးစကားပြောဆိုမှုသည်ပါးစပ်ယဉ်ကျေးမှုရှိသူများအတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ထို့ကြောင့်၊ ၎င်းသည်ဖြစ်နိုင်သမျှကာလပတ်လုံးကြာရှည်စွာရပ်တန့်မသွားစေရန်သေချာအောင်ပြုလုပ်သင့်သည်။ အခုစကားဝိုင်းကဘာလဲ၊ စကားစမြည်ကိုအဆုံးသတ်ရန်မဟုတ်ပါကအနည်းဆုံးအချိန်ကာလအားဖြင့်ပြောရလျှင်မည်သည့်စကားလုံးက“ NO” ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် NO ဟုဆိုပါကကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့မလိုချင်သောကြောင့်၊ တိုတောင်းသောအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အခြားတစ်ခု၏တောင်းဆိုချက်အရအသုံးမ ၀ င်ပါ။ ထို့ကြောင့်အာဖရိကဒေသသုံးဘာသာစကားများစွာတွင် NO ၏ဘာသာပြန်ချက်သည်မတည်ရှိခြင်းမှာအံ့သြစရာမဟုတ်ပါ။ ဤစကားလုံးသည်ပြင်သစ်နှင့်အနောက်တိုင်းဘာသာစကားများတွင်တည်ရှိပြီးဖြစ်သော်လည်းအာဖရိကဘာသာစကားများသည်သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံများ၏တရားဝင်ဘာသာစကားများဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်နေရာများစွာတွင် (တည်ရှိနေသောမြို့ကြီးများမှအပကောင်းမွန်သောအခြေအနေများတွင်) တည်ရှိသည်။ ဥရောပအချက်များ ... ) စကားပြောဆိုမှု၌ဤ negation ၏ငြင်းဆန်။
၎င်းသည်ပြင်းထန်သောအကျိုးဆက်များမရှိဟုထင်ရသော်လည်းနောက်တစ်ခါစဉ်းစားပါကဥပမာအားဖြင့်၊ တံခါးပိတ်မေးခွန်းများမမေးသင့်ပါ။ သင်၏တောင်းဆိုမှုများအားလုံးသည်ဖွင့်ထားသောမေးခွန်းများဖြစ်ရမည် (သို့) သင် (သင်သတိမထားမိဘဲ၊ သင်၏အကြီးမားဆုံးပျော်ရွှင်မှုသို့မဟုတ်အကြီးမားဆုံးသောကံမကောင်းမှုများကိုပင်လျှင်) သင်အမြဲတွေ့မြင်နိုင်သည်ကိုတွေ့ရလိမ့်မည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကပြင်သစ်ဗိသုကာပညာရှင်များသည်စျေးနှုန်းကိုပေးဆပ်ခဲ့ရသည်။ ကျွန်ုပ်သည်မည်သည့်နိုင်ငံကိုမမှတ်မိသည်မှာ၎င်းသည်ဒေသခံလက်မှုပညာရှင်များမှဆောက်လုပ်ခဲ့ပြီးပြင်သစ်ဗိသုကာများ၏ညွှန်ကြားမှုကိုခံယူသောပြင်သစ်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှငွေကြေးထောက်ပံ့သောဗလီတစ်လုံးဆောက်လုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ ။ နောက်ဆုံးမေးခွန်းသည်ပွင့်လင်းသောမေးခွန်း၏ပရိယာယ်ကိုမသိပါ၊ ထို့ကြောင့်သူတို့ကကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်နေပြီးအချိန်ချွေတာရန်စဉ်းစားကြသည် (အနောက်ပုံစံ!) ကိုသူတို့အမြဲတမ်းဟုတ်ကဲ့ဖြေဆိုနိုင်ရန်သူတို့၏မေးခွန်းများအားလုံးကိုမေးခဲ့သည်။
ဤဗိသုကာပညာရှင်များသည်မိမိတို့လိုချင်သောချက်ချင်းထိုးဖောက်နိုင်သည့်စိတ်အားထက်သန်သောလူ ဦး ရေနှင့်ရင်ဆိုင်ရသည့်အခါမည်မျှပျော်ရွှင်လိုက်မည်နည်း။ ဟုတ်တယ်၊ ဒါပေမယ့်အောက်ခြေကဘယ်နေရာမှာမဆို၊ ခမ်းနားထည်ဝါသောအဆောက်အအုံပြီးဆုံးသည်နှင့် (၃ နှစ်အလုပ်လုပ်သည်) တစ်ချိန်ကမည်သည့်ပြင်သစ် ၀ န်ကြီးမှမည်သည့် ၀ န်ကြီးဌာနကိုဖွင့်သည်ကိုမသိခဲ့ပါ၊ ဗလီဖျက်ဆီးခံရပြီးပျက်စီးသွားခဲ့သည်။ မက္ကာမြို့နှင့်မဆန့်ကျင်သောဗလီတစ်ခုတည်ဆောက်ရန်ကျွန်ုပ်တို့တွင်အကြံဥာဏ်ရှိပါသလား။ ဟုတ်ပါတယ်၊ အလျင်အမြန်နဲ့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းမေးခွန်းတွေကြောင့်ဗိသုကာတွေဟာဗလီကျောင်းရဲ့အရေးကြီးတဲ့ပြproblemနာကို (ဒီကိစ္စအတွက်ဘုရားကျောင်းလို) စိတ်ဝင်စားဖို့မေ့နေကြတယ်။ သူတို့ကမှန်ကန်တဲ့မေးခွန်းတွေမမေးခဲ့ကြဘူး၊ ထို့ကြောင့်လုပ်ငန်းသည်သုံးနှစ်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီး၊ ဗိသုကာပညာရှင်များထွက်ခွာသွားသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်ဗလီဖျက်ဆီးခံရမည်ကိုလူတိုင်းသိကြသည်။ ! ဒီဥပမာကဒီယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအသေးစိတ်မသိမှုတွေရဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုကောင်းစွာဖော်ပြသည်။.
Memory ကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့ခဲ့ရသည့်အတိုင်းလူ့အဖွဲ့အစည်းများ၏မှတ်ဉာဏ်သည်စက္ကူဖြစ်သည်။ စာအုပ်များဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သင်၏ PC ၏ ROM ဖြစ်သည်။ အတိုချုပ်ပြောရလျှင်ကွန်ပျူတာပြင်ပရှိရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းများဖြစ်သည်။ လူ့ခန္ဓာကိုယ်။ နှုတ်ဖြင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင်မှတ်ဉာဏ်သည်ကိုယ်ခန္ဓာ၊ ဦး ခေါင်း၊ ဦး နှောက်အတွင်း၌ရှိသည်။ ၎င်းသည်အလွန်သေးငယ်သောကွာခြားချက်တစ်ခုဟုထင်ရသော်လည်း၎င်းနှင့်ဆန့်ကျင်နေပုံရသည်။ ၎င်းသည်ရေးသားထားသောလူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့်ပါးစပ်လူ့အဖွဲ့အစည်းများအကြားယဉ်ကျေးမှုကွာခြားမှု၏မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းလူမျိုးရေးပညာရှင်များစွာကသင့်ကိုပြောလိမ့်မည်။ အချက်အလက်များစွာကိုသင်မှတ်မိရန်လိုအပ်သည်ဟုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ၊ သို့သော်၎င်းသည်ပြင်ပရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှုမပါဘဲ (ချက်ချင်းသိသာထင်ရှားမှုမရှိပါ။ ) ၎င်းကိုသင်ပထမ ဦး ဆုံးလုပ်ရန်မှာဤအလုပ်ကိုလုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ ရိုးရှင်းပါတယ်? ပထမအချက်အနေဖြင့်သတင်းအချက်အလက်များကိုအသင့်တော်ဆုံးနှင့်အသုံး ၀ င်စေရန်သာသင်သေချာစွာစီစစ်ပါလိမ့်မည်။ ထို့နောက်သတင်းအချက်အလက်များကိုသေချာစွာမှတ်မိရန်အောင်မြင်ရန် subterfuge ကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်။ ကောင်းပြီ၊ ဒီစိတ်အခြေအနေမှာပါးစပ်ယဉ်ကျေးမှုရှိသူတွေဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုတွေ့ရှိကြတာပါ။
သတင်းအချက်အလက်အမျိုးအစားခွဲခြင်းအနောက်တိုင်းလူ့အဖွဲ့အစည်းသည်စာဖြင့်ရေးသားသောသတင်းစာများ၊ သရော်စာသတင်းစာများ၊ ရုပ်မြင်သံကြားသတင်းများ၊ ရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လွှင့်မှုများ၊ နာမည်ကြီးသတင်းစာများ၊ အင်တာနက်များစသဖြင့်အမျိုးမျိုးသောသတင်းအချက်အလက်အမျိုးမျိုးဖြင့်လွှမ်းခြုံထားသည်။ တစ်ခါတစ်ရံဤအရာအားလုံးကိုတစ်ချိန်တည်းတွင်!), ဒေတာကိုလှော်! ! ! Homo occidentalus သည်ဤသတင်းအချက်အလက်အမြောက်အမြားရောင်းဝယ်မှုတွင်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးအရာရာကိုမည်သို့မှန်အောင်မည်သို့ပြုပြင်ရမည်ကိုသိသောအဝေးမှမြင်နိုင်သောလူသားတစ် ဦး အနေဖြင့်သူ၏အခန်းကဏ္, သည်ဤစဉ်ဆက်မပြတ်အချက်အလက်များ၏စီးဆင်းမှုကြောင့်မကြာခဏထိခိုက်ပျက်စီးစေသည် အခြားသူများ။ ဤအခြေအနေများတွင်၊ သင်လုံးဝရရှိရမည်ဖြစ်သောထိုးထွင်းသိမြင်မှုရှိရန်နှင့်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုဖယ်ရှားရန်အမြဲမလွယ်ကူပါ။ ဒီတော့ဒီနေ့ကြယ်နက္ခတ်အကယ်ဒမီမှ Nolwen ရဲ့ဘဝဇာတ်ကြောင်းကိုလူအများပြောနိုင်တဲ့လူအများရှာဖွေခြင်းဟာ (အံ့ (စရာကောင်းလောက်အောင်အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်မဟုတ်) မဟုတ်လား။ အစ္စရေး - ပါလက်စတိုင်းပconflictိပက္ခ၏ရင်းမြစ်အကြောင်းရင်းများ (…နှင့်ဘိုးဘွားပိုင် ???) ကိုမည်သူသိကြောင်းသတိပေးခဲ့သည်။
ဒါကသတင်းအချက်အလက်လူ့အဖွဲ့အစည်းပဲ၊ ငါတို့မျိုတယ်၊ မျိုတယ်၊ နောက်ဆုံးတော့မှတ်မိဖို့ကောင်းတာကိုငါတို့မသိတော့ဘူး။ အခုအာဖရိကကိုသွားကြစို့၊ အင်တာနက်ရှိတာပေါ့၊ အနည်းဆုံးမြို့ကြီးတွေမှာသတင်းစာတွေအများကြီးရှိတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါတို့သိပြီးသားအတိုင်း, ပါးစပ်ထုံးတမ်းစဉ်လာမျိုးသုဉ်းရန်ဝေးသေးသည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့ရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များကိုအလွယ်တကူစီရန်လွယ်ကူခြင်းနှင့် "memory size" ၏ထင်ရှားသောအကြောင်းပြချက်များကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်သင် (သူတစ်ပါးကိုစိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာများကိုပြောနေသရွေ့) သည်သင်ပြောသောအရာကိုမှတ်မိလိုလျှင်ချုံပုတ်၌မရိုက်ပါနှင့်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ သင်သည်ဤနည်းဥပဒေကိုမလိုက်နာပါကသင်၏ပြောဆိုသူသည်သင်ပြောသည့်အရာသည်အရေးမကြီးကြောင်း၊ သူသည်လျင်မြန်စွာစိတ်မရှည်တော့ကြောင်းပြသရန်မတွန့်ဆုတ်ပါ။
ဒေတာချုံ့ခြင်းပြည်တွင်းမှတ်ဉာဏ်ကိုအသုံးပြုခြင်းတွင်လိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်အားလုံးကိုသိမ်းဆည်းရန် mnemonic နည်းလမ်းများအသုံးပြုခြင်းလည်းပါဝင်သည်။ အာဖရိကန်သည်ရုပ်ပုံများကိုမကြာခဏရည်ညွှန်းလေ့ရှိသော်လည်းမှတ်မိရန်မှာပိုမိုလွယ်ကူသည်။ ဒါကြောင့်အာဖရိကတိုက်ကပုံပြင်တစ်ပုဒ်ကိုမှတ်မိချင်တယ်ဆိုရင်သူဟာဒီဇာတ်လမ်းကိုအဓိကရှုထောင့်တွေ (အခြေအနေ၊ ကိုယ်ကျင့်တရား ... ) ကိုသာထားခြင်းအားဖြင့်ပုံကိုတင်ရမယ်။ ပြီးတော့အာဖရိကကိုသင်သွားတဲ့အခါဒီပုံရဲ့ပထမပုံဥပမာကဒဏ္ablesာရီပုံပြင်တွေဖြစ်တယ်။ သုတ္တံ့စကားများပြောခြင်းသည်အဆန်းမဟုတ်ပါ၊ ပထမ ဦး ဆုံးအနေဖြင့်စကားဝိုင်းများတွင်စိတ် ၀ င်စားစရာဖြစ်သော်လည်း၊ ၎င်းတို့ထဲမှတစ်ခုသည် Burkina Faso တွင်ကျော်ကြားသည်။ Burkina Faso ၏သမ္မတဟောင်း Thomas Sankara သည်François Mitterrand ကိုမှတ်ချက်ချသည်။ ဤစီမံကိန်းသည်နှစ်နာရီအတွင်းပြင်သစ်နှင့်ဘာကီနာတို့အကြားစီးပွားဖြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစီမံကိန်းတစ်ခု (လမ်းကြောင်းတစ်ခုတည်းဖြင့်သာအမြတ်အစွန်းရနိုင်သည့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု) ကိုဘာကီနာဖာဆိုအားသမ္မတအားဖော်ပြခြင်းမရှိဘဲအဆုံးတွင်စကားလုံးတစ်လုံးမျှမပြောခဲ့ပါ။ ဒီနှစ်နာရီအကုန်မှာသမ္မတ Sankara ထပြီး "မင်းကဖားကိုသွားရင်ထိုင်ခုံထိုင်ခိုင်းဖို့မတောင်းဆိုဘူး" လို့ကြေငြာပြီးထွက်ခွာခဲ့ပြီးပြင်သစ်သမ္မတကိုထားခဲ့တယ်။
တစ်နည်းအားဖြင့်ပြောရလျှင် "မင်းဘာလုပ်ဖို့ငါ့ကိုတောင်းဆိုတာလဲ၊ ငါ့ကိုဘာမှမလုပ်တော့ဘူး" များသောအားဖြင့်အတိုဖြတ်သော်လည်းထိရောက်သောသင်မကြာခဏသူတို့ကိုနားလည်ရန်နှင့်သူတို့၏နယ်ပယ်အပြည့်ကိုနားလည်ရန်လိုသည်။ အကယ်၍ ကောင်းစွာနားထောင်မည်ဆိုလျှင်ဤသုတ္တံစကားအားမှတ်စုစာအုပ်ကိုသင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖြည့်နိုင်သည်။ ဤအသုံးအနှုန်းများသည်ယနေ့အချိန်အထိအသုံးပြုနေဆဲများနှင့်လည်းဆင်တူသည်။ အချို့သည်ပြီးပြည့်စုံသောလိုက်လျောညီထွေဖြစ်မှုများ (ဥပမာအားဖြင့်၊ အာဖရိကတွင် "ကျွန်ုပ်တို့သည်လှည်းကိုမြင်းများရှေ့တွင်မထားရဟုပြောမည့်အစား)" Iguana ကိုရေထဲတွင်မစီးရ။ ")" ကောင်းပြီ၊ ဒါကမတော်တဆမဟုတ်ပါ။ ၂၀ ရာစုအစပိုင်းတွင်စာမတတ်သူနှင့်ကျေးလက်ဒေသအများစုဖြစ်သောမြောက်ပိုင်း (သို့) အနောက်ပိုင်းလူ ဦး ရေရဲ့အများစုဟာပြန်လည်ထူထောင်လာခဲ့တာကိုမမေ့ကြစို့နဲ့ အတွင်းပိုင်းမှတ်ဉာဏ်။ ထိုးထွင်းသိမြင်မှုနှင့်ရှင်းလင်းပြတ်သားမှုဤလူ ဦး ရေသည်ရှားပါးသောရှားပါးသည့်ထိုးထွင်းသိမြင်မှုနှင့်ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်သူသည်ပင်သတိမထားမိဘဲ၊ တွေ့ဆုံမေးမြန်းသူနှင့်ပထမဆုံးတွေ့ဆုံစဉ်သူသည်သင်၏စကား၊ သင်၏အပြုအမူနှင့်အညီသင့်ကိုပုံဖော်ပေးလိမ့်မည်။ သူကမင်းကိုမှားယွင်းစွာသင်သို့မဟုတ်သင်သူ့ကိုလှည့်ဖြားရန်အခွင့်အလမ်းအနည်းငယ်သာရှိသည်။
SOURCE မှ: http://fr.answers.yahoo.com/question/index?qid=20081203015546AAroTUB
သင်နှင့်အတူကွဲလွဲနေခြင်း - Joe Dispenza (အသံ)
Oprah Winfrey, အောင်မြင်မှုတစ်ခုမော်ဒယ်
စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ Adama (2015)
အလယ်ခေတ်အလယ်ပိုင်းရှိဆူဒန်အာဖရိက - အင်ပါယာကြီးများခေတ် (ဂါနာ၊ မာလီ၊ ဆန်)